Wasaaradaha Internetka - Kaniisadaha Kooxda Kooxda Waxqabadka Musiibada ee Masiixa
Kooxda Kooxda Waxqabadka Musiibada si dhaqsi ah ayaa loo heli karaa shirka degaanka ee degaanka ku yaala aagga dhibta ba'an. Ujeedada Kooxda Waxqabadka Musiibada waxay tahay in ay ka caawiso ururka degaanka ee qorista iyo helitaanka tabaruce si ay u caawiyaan baahiyaha dareenka iyo maskaxda ee dhibbanayaasha musiibada iyo in ay ka caawiyaan marxaladda nadiifinta iyo dib-u-dhiska.
Kooxda Hawl-celinta Musiibada waxay soo saari doonaan kuwan soo socda si loo geeyo goobaha musiibada si ay u caawiyaan ururrada maxalliga ah si ay ula xiriiraan bulshadooda:
Gawaarida si buuxda loo hayo
Kooxda Kooxda Wax Ka Qabashada Musiibooyinka waxay soo iibsadaan cuntada loo adeegsanayo dhammaan bulshooyinka meelaha musiibada ah iyo sidoo kale qalabka dhismaha, sahayda guriga, qalabka, saaridda burburka, iwm. Kuwa aan helin / aan caymis lahayn.
WAA MAXAY KOOXAHA KOOXAHA KA HORTAGA EE MUSIIBADA?
Tababarayaasha 1st Responses Isku-duwaha Tabaruceyaasha ayaa loo keenay si ay uga caawiyaan ururkaada inay sameeyaan dadaal gargaar oo la shaqeynaya qaybinta, nadiifinta iyo dib-u-dhiska qaybaha
30 'Qaybta Macaamiisha ee Macaamiisha Ganacsiga ee loo keenay inay u adeegaan cuntada 3,000-4,000 / maalin si ay u noqoto bulshada iyo tabaruceyaasha
1st Response Semi Tram Tool iyo dhowr farshaxan oo dheeraad ah oo lagu soo dajiyay oo lagu soo saaro jeneraal, miinshaaro, shool, jajab, rinjiga, qalab kasta oo loo baahan yahay tabaruceyaasha
RV ayaa loo keenay si loogu caawiyo dadka iskaa wax u qabso ku shaqeeya
Gaadiidka lagu dhaqo isticmaalka iskaa wax u qabsashada
Macluumaadka kumanaan qof oo tabaruce ah oo la saxiixday DRT kuwaas oo loogu yeero shaqo
Kooxda Waxqabadka Musiibada waxay kaa caawineysaa inaad iibsato cunto iyo qalab dhismo
836 S. Waddada Dugsiga Brown
Waxaan ku faraxsannahay inaan bixino macluumaad dheeraad ah oo aad ubaahan karto. Waxaan diyaar u nahay in aan u nimaadno ururkaaga si aan u soo bandhigo dedaaladii hore ee gargaarka. Fadlan wac Kooxda Kajawaabidda Musiibada si aad u sameysatid soojeedin.
Haddii aad rabto macluumaad dheeraad ah fadlan la xiriir Steve Liles at 937-689-5725 ama Karen Kofahl at 214-734-9647.